Nezvedu - Shenzhen Yrsooprisa Pro Runako Co., ltd
Pro Makeup Brush Yakagadzirirwa
Pro Eye Brush Yakagadzirirwa
Pro Kutarisana neBrashi
Dual Mugumo Wakatarisana neBrashi
Pro Ziso Brashi
Dual End End Eye Brush
Mhepo Cushion Puff
OEM ODM Maitiro
Shenzhen Yrsooprisa Pro Runako Co., ltd.
kutsvaga muShenzhen guta, China, inyanzvi bhizinesi iyo inotsvaga pakutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa, uye kutengesa kweyekugadzira mabhurashi, zvipikiri art mabhurashi uye zvimwe zvekuzora.
Isu tiri vagadziri vepakutanga, vane mhando yepamusoro, yakasimba sisitimu yekudzora mhando, kukurumidza kuburitsa uye mutengo wemakwikwi, zvichitiita mukurumbira kunze kwenyika.
Isu hatisi chete fekitori yekusangana asiwo fekitori yezvigadzirwa. Saka isu tinogona kutora zvirinani kutonga kwemutengo, dhizaini nguva uye mhando.
Yedu Fekitori inovhara nzvimbo inopfuura 3000 mativi emamirimita, vashandi vekugadzira mitsara vanhu vanopfuura zana pari zvino. Fekitori ine yakakwana mhando manejimendi sisitimu, yakapasa chiyero chemhando yepamusoro manejimendi system ye ISO9001, ISO14001. Zvese pamwe, kune mazhinji anozivikanwa epamba uye ekunze mabhenji OEM.
Makore ezviitiko muKutsvagisa uye Kubudirira, Dhizaini, Kugadzira uye Kushambadzira kwepasi rose kwezvigadzirwa zvekugadzira, YRSOOPRISA inogonesa kupa akasiyana siyana ekugadzira maturusi; kugona kwakanyanya kupa mutengo wakakwikwidza, mhando yepamusoro, zvigadzirwa zvakachengeteka kune vatengi vedu.
Kunyanya, isu tinogona kupa zvigadzirwa zvakagadziriswa, kuvandudza kwehunyanzvi uye dhizaini, yakasarudzika uye yakagadzirirwa. Kuva nezvakawanda zvedu pachedu kuumbwa uye patent uye zviratidzo, Ita kuti zvigadzirwa zvako zvinyanye kusarudzika.
Zvigadzirwa edu aivigirwa kuna Europe, North America, Southeast Asia, Middle East, South America uye dzimwe nyika uye kumatunhu.
Tine zvinopfuura chiuru zvakagadzirwa mabhurashi uye maturusi ekushandisa.
Nekuenderera mberi kwekuvandudza kwekambani, zvinowanda uye zvigadzirwa zvitsva zvichaunzwa kumusika wepasi rose.
Muvambi wedu "Hanne Chen", anga ari muInternet Kushambadzira uye Kutengesa kubvira 2008, anonyatso ziva necheni rese indasitiri uye musika wepasi rose. Akave akanamatira kune iko kutenda "Professionalism & Mutengi Kutanga"
Isu tinofara kukupa iwe neakanakisa sevhisi uye isu tinotenda kuti isu tichabatsira mukubudirira kwako mubhizinesi.
Kana paine chero munhu anofarira OEM / GADZIRIRO / ODM, tinogamuchirwa kuti muuye kwatiri kuti uwane rumwe ruzivo.
Professional Mugadziri weMakeup Shongedzo OEM / ODM / Yakagadzirirwa / YEMAHARA LABEL.
Shenzhen YRSOOPRISA PRO Kunaka Co., Ltd.